Onyinye | Li Tim-Oi Foundation - enyere ọbụna ụmụ nwanyị aka
Inye onyinye na Foundation
Etu esi enye
Li Tim Oi Foundation dabere na mmesapụ aka nke ndị na-akwado ya.
Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu maka ndị na-akwado anyị maka mmesapụ aka ha n'ime afọ 25 gara aga. Nkwado ha nyeere anyị aka inye onyinye maka ọtụtụ ụmụ nwanyị ruru eru. Anyị maara, n’agbanyeghi, na mkpa agụmakwụkwọ ka na-abawanye, yana na site n’ịba ụba ego anyị nwere ike inyere ọbụna ụmụ nwanyị aka.
Anyị na-anabata onyinye otu onye ma ọ bụ onyinye mgbe niile, onyinye enyere ya ebe ọ bụla dabara. Anyi na - agbakwa ndị na - akwado ume ka ha cheta Foundation n'ihe ha chọrọ. Anyị ahụla mmetụta mgbanwe nke agụmakwụkwọ nwere na ndụ ụmụ nwanyị ndị na-anata ọzụzụ na ndụ nke ndị ha bi na ha na-arụ ọrụ. Site na ịhapụ otu ihe nketa, ị na-enyere aka hụ na ọgbọ na - esote ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ Anglịkan ga-adị njikere igbo mkpa nke ụka ha na obodo ha. Enwere ike ịchọ ndụmọdụ onye ọka iwu, agbanyeghị na enwere ike ibudata usoro edemede enyere maka Codicil dị mfe maka ihe dịnụ Ebe a.
Can nwere ike ịkwado anyị ugbu a n'ịntanetị Ebe a
Ememe Iwu ato
nyere Society oge ndụ niile maka nkwalite nke Ihe Ọmụma Ndị Kraịst. Nime ya ka o rapuru ihe enyere aka iji kwado ndi nwanyi n’ akwadoro maka oru. SPCK Worldwide kpebiri na Li Tim-Oi Foundation kwesịrị ịhazi ego ndị a, na Ms Sue Parks, onye bụ Onye Nduzi ya n'oge ahụ, ghọrọ onye Nlekọta nke Foundation. Ugbu a anyị ekesala ego nke mgbaghara violet ma na-anọgide na-ekele ndị SPCK maka ịnụ ọkụ n'obi ha na okike ha na mmekorita ya na Li Tim Oi Foundation.
Linlọ Rev Linda Woolhouse
bụ otu n'ime ndị ụka mbụ England nke ndị ụkọ chiri hiwere na 1994. Linda hapụrụ thelọ Ọrụ ihe nketa dị mkpa site na ozi nke ụmụ nwanyị o zutere na Tanzania. Ọ tụlere na inye onyinye nke Li Tim Oi Foundation bụ ụzọ kachasị mma iji nyere ụmụ nwanyị aka na Tanzania n'ọdịnihu.
Nwanne Florence Li Tim Oi nyere ego iji malite ntọala ahụ. Mgbe Rita nwụrụ na 2016, ọ hapụkwara ihe nketa onyinye nyere Foundation na uche ya. Ihe nketa Rita putara na Ntọala a nwere ike ịbawanye mbara ya ma gbakwuru ụmụ nwanyị nọ na mba ebe ọ nweghị ụmụ nwanyị etinyela akwụkwọ maka onyinye. Onyinye aka ya ga-agbanwe ndụ ya, na ncheta nke nwanne nwanyị ọ hụrụ n’anya ma nwee mmasị n’ebe ọ nọ.
Ihe iwu ato a enyerela aka kwado ọrụ nke Foundation. Obi dị anyị ụtọ maka ụmụ nwanyị ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ na-akwado nkwado na-aga n'ihu na-enye onyinye.
Ihe ndekọ Li Tim-Oi Foundation
Ihe ndekọ kachasị ọhụrụ maka Li Tim-Oi Foundation dị na weebụsaịtị Charity Commission Ebe a. Detuo onyinye ebere anyị. 1027837 wee tapawa ya n’ime igbe ọchụchọ na weebụsaịtị ya.